प्रदेश २ मा तीन दिन होली- मधेस - कान्तिपुर समाचार
पर्सा — मध्यतराईमा यस वर्ष तीन दिन होली खेलिँदै छ । गत वर्ष पनि यस्तै संयोग परेको थियो । आइतबारबाटै सुरु भएको होली यहाँ मंगलबारसम्म चल्नेछ ।
वीरगन्जमा आइतबार होली खेल्दै बालबालिका
यहाँ बसोबास गर्दै आएका पहाडी समुदायले आइतबार होली मनाए । सामान्यतया फागुपूर्णिमाको भोलिपल्ट तराईमा होली खेल्ने चलन रहेकाले सोमबार खेलिने भएको छ । उक्त दिनका लागि संघीय सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ । यता, प्रदेश सरकारले मंगलबार होली बिदा दिएकाले उक्त दिन पनि खेलिने भएको छ ।
यो वर्ष वीरगन्जमा होली मिलन समारोह तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम भने आयोजना भएका छैनन् । आइतबार साँझ गाउँघरका चोकहरूमा संवत् जलाउने र स्थानीयले त्यसको खरानीको टीका लगाएपछि सोमबार होली खेल्नेछन् ।
साहित्यकर्मी मुकुन्द आचार्य होली पर्वलाई धार्मिकभन्दा पनि सांस्कृतिक हिसाबले मनाउने चलन भएकाले अधिकांश तराईवासीले दुई दिन होली खेल्ने बताउँछन् । ‘होलीमा रमाइलो गर्ने, आफन्तजन, इष्टमित्रसँग भेटघाट गर्ने, सामूहिक खानपिन गर्ने चलन छ,’ उनले भने, ‘होली पर्वको धार्मिक र सांस्कृतिक पक्ष छ ।’ बारा, पर्सा र रौतहटको होलीले पर्वमात्र नभई भोजपुरी संस्कृतिको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ ।
यहाँ परिवारका सदस्यबाहेक आफन्त र इष्टमित्रलाई पनि घरमा बोलाएर विभिन्न परिकार खुवाउने चलन छ । भारतसँगको भौगोलिक सामीप्यता तथा सहज आवागमनको सुविधाका कारण भारत र तराईको होलीबीच धेरै सामीप्यता छ । भारतका होली गीतमा प्रसिद्ध धार्मिकस्थल तथा तीर्थस्थलको साथै कृष्ण, ब्रज, द्वारकाको प्रसंग उल्लेख हुन्छन् भने नेपालका गीतमा जनकपुर, रामजानकी, जनकको प्रसंग बढी हुन्छ ।
प्रकाशित : चैत्र १६, २०७७ ०८:४४
ती भूपालमान, यी दुर्गाप्रसाद
वर्षौं जेलमा राखेर निर्दोष ठहर गरेर छाडिसकेपछि कसैलाई रित्तै हात लघार्ने काम लोकतन्त्रको कस्तो चरित्रमा पर्छ भनेर बाँकी दुनियाँलाई बताउनुपर्छ, भारतीय लोकतन्त्रले ।
नेपालले यो विषयमा भारतसँग तत्काल कुरा गर्नुपर्छ । पीडित नागरिकलाई अभरका बेलामा समेत काम नलाग्ने राज्य, देश कुन मनले शिरमा बोकिबस्छ नागरिकले नत्र ?
चैत्र १६, २०७७ यादव देवकोटा
भूपालमान : चौध वर्ष सात महिना२०७१ सालको मध्यमंसिरमा सुनधारा पछाडिको भोटेबहालको एउटा होटलमा भेट्दा बिन्जेल–५, सिन्धुपाल्चोकका भूपालमान दमाई समयको पटरीमा अल्झिएको जिन्दगानीको बाँकी घडी कसरी चलाउने भनेर गहिरो बिलखबन्दको बन्दी बनिबसेका थिए ।
भूपालमानले त्यसअघि सपनामा पनि नचिताएको इन्डियन एयरलाइन्स अपहरण, भारतीय बैंक डकैतीलगायतका नक्कली आरोपमा गिरफ्तार गरिएर साढे चौध वर्ष अनाहकमा भारतीय जेलमा बन्दी जीवन निखारिसकेका थिए ।
भूपालमानले मसँग भने अनुसार, उनी श्रीमती र तीन छोराछोरीसहित जिन्दगीको दुःख पखाल्न सिन्धुपाल्चोकबाट काठमाडौं आई पसिना बगाइरहेका थिए । बागबजारमा सानोतिनो रेस्टुरेन्ट, सडकमा जुत्ता–कपडाको व्यापार । कहिले भरिया, कहिले के । यसै गरी चलिरहेको जिन्दगानी तैबिसेक सजिलो भइजाला कि भनेर उनी भूपालमान दमाईबाट फेरिएर युनुस नेपाली भएका थिए, बागबजारकै कोही चिनारु मुसलमान हितैषीको प्रभावमा बेरिएर ।
तिनैसँग रेस्टुरेन्ट आउजाउ गरिरहने बागबजारकै केही मुसलमानले सपना देखाइदिए— मुम्बईमा रेस्टुरेन्ट चलाउन सक्ने हो भने महिनाकै पचास हजार भारुभन्दा बढी कमाइ हुन्छ । गरिबीको कोर्राले हानेको नीलडाम सुमसुम्याउने सहजता पनि नपाएको एउटा दुखिया कमाइको चहकिलो सपना पालेर काठमाडौंमा पुगमपुग खाले गुजाराको भरोसा बनेको रेस्टुरेन्ट एक वर्ष अरू कसैलाई चलाउने जिम्मा थमाएर मुम्बई हान्नियो श्रीमती र छोराछोरी बोकेर, २०५६ सालको मंसिरमा ।
त्यसपछि भूपालमानको जीवनमा जुन अत्याचारको आकाश खसायो भारतीय सत्ताले, साढे चौध वर्षसम्म कहिले मुम्बईको आर्थर रोड जेल त कहिले पन्जाबको पटियाला जेलमा सडाएर, त्यसैको उत्कर्षमा घरको न घाटको जस्तो नियतिबाट गुज्रिएर ‘भोलि उठी कहाँ जाने केही थाहा छैन’ भन्दै निन्याउरिएका भूपालमान भेटिएका थिए, भोटेबहालको त्यो होटलमा ।
भूपालमानले मुम्बई पुगेपछि रेस्टुरेन्ट चलाउन नसकिने निचोडसहित सडकमा कपडा बेच्ने काम थालेको केही साता मात्रै भएको थियो । २०५६ पुस ९ मा काठमाडौंबाट भारतको नयाँदिल्लीतर्फ उडेको इन्डियन एयरलाइन्सको विमान अपहरित भएको थियो । पुस १५ मा मुम्बईको सडकमा कपडा बेचिरहेको अवस्थामा भूपालमान उर्फ युनुस नेपाली पक्राउ गरिए भारतीय प्रहरीबाट । दुवै कानमा करेन्ट लगाई, भारतीय प्रहरीले तयार पारेको कागजमा बलपूर्वक सहीछाप गराएर भूपालमानमाथि विमान अपहरण, बैंक र कार चोरीलगायतको अभियोग लगाइयो । त्यही अभियोगमा उनी आजीवन कारावासको सजाय तोकेर जेल पठाइए ।
अन्यायपूर्वक, बिनाअपराध सत्ता संरचनाको बलमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्रको डंका पिटिबस्ने भारतीय प्रहरी, अदालत र व्यवस्थाले भूपालमानलाई जेलमा कोचे । त्यसविरुद्ध पुनरावेदन गर्न वकिल राख्ने खर्च नभएपछि सहयोग पाइएला कि भनेर उनले नेपाली दूतावासमा गुहार लगाए । विदेशी जेलमा निरपराध, फर्जी आरोपको सिक्रीले बाँधिएर राखिएकामा त्यसबाट छुटकाराका लागि सानोतिनो सहयोग गरिपाऊँ भनेर भूपालमानले लगाएको याचनायुक्त गुहारको पत्रलाई दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले भारतीय सत्ता संस्थापनको चित्त रिझाउन डस्टबिनमा फालिदियो र बेवास्ताको तातो झीरले भूपालमानको छातीमा डामिदियो ।
अनेकन् हन्डर, अपमान र संकटको विशाल पहाडसँग जुध्दै भूपालमानले गरेको पुनरावेदनमाथिको जवाफमा भारतीय प्रहरीले विमान अपहरणको प्रमाण अदालतमा बुझाउन नसकेपछि चौध वर्ष सात महिना भारतीय जेलमा बिताएर हरियाणा उच्च अदालतबाट निर्दोषको खिताब पहिरेर उनी २०७० चैत २२ मा थुनामुक्त भए । तर, रित्तो हात । तिनै चौध वर्ष, निर्दोष हुँदाहुँदै भारतीय लोकतन्त्रले व्यवस्था, प्रशासन र अदालतको गठजोडमा गरेको अन्यायका कारण भूपालमानको जिन्दगी नै भताभुंग भयो । उनी जेल परेको केही वर्षमा पत्नी अर्कै पुरुषसँग विवाह गरेर बाटो लागिन् । तीनै छोराछोरी सम्पर्कविहीन भए । उनको परिवार बरबाद भयो । जिन्दगीको लय तहसनहस भयो । तर त्यसरी अन्यायपूर्वक जीवन बरबाद बनाइएका भूपालमानका लागि बोलिदिन राज्य कहिल्यै अघि बढेन । बिनाअपराध साढे चौध वर्ष जेलको कोठरीमा सडाई रित्तो हात बिचल्ली बनाएर धपाउने भारतीय लोकतन्त्रको यो खेलाचीमा भूपालमानका लागि बोलिदिन राष्ट्रवादको लहरेखोकीले प्रताडितहरू कोही अघि सरेनन् ।
देशमा राष्ट्रवादका अनेकन् भावभंगीका उद्योगहरू चलाइरहन्छन्, हाम्रा राजनीतिक पेसेवरहरू । राष्ट्रवादको आवरणमा आफ्नो राजनीतिक पसलको व्यापार चम्काउन । मयलपोशमा सजिएर टेलिभिजनको पर्दाबाट सीमा युद्धको ऐलान गर्दै राष्ट्रवादको गफ बेचिबस्ने बतासेहरूको उस्तै बिगबिगी छ, यो देशमा । त्यसमा कहिल्यै भूपालमानजस्ता निरीह नागरिकहरूमाथि भारतीय सत्ताले थोपरेको अन्याय र अत्याचारको हिसाब बिर्सेर पनि अटाउँदैन । हाम्रा कथित राष्ट्रवादीहरूका लागि राष्ट्रवाद भनेको दोबाटामा कुर्लिएर राम र सीताको चिहान उधिन्नु हो । देश र जनतालाई चुसेर र लुटेर बदलामा पाल्सी लैबरी फलाक्नु हो । महाकाली बेच्नु हो । विदेशीका लागि कम्फर्टेबल सरकार बनाउनु हो । विदेशी सत्ताको शरणमा बिन्तीपत्र चढाउँदै ‘तिम्रो स्वार्थलाई शिरमा पहिरिन्छु, तिम्रो देशमा आरामसँग बसेर मेरो देशमा हिंसाको खाल मच्चाउन देऊ’ भन्नु हो ।
तिनको राष्ट्रवादको लैबरीमा जनता कहिल्यै अटाउँदैनन् । देश कहिल्यै अटाउँदैन । विदेशीलाई रिझाएर सत्ताको हन्डी हत्याउनेबाहेक अतिरिक्त कुनै कार्यक्रम हुँदैन । नत्र त भूपालमान दमाईले ‘म अन्यायविरुद्ध बोल्न चाहन्छु, गैरकानुनी जेल यातनाको क्षतिपूर्ति चाहन्छु, तर मैले आफ्ना लागि बोलिदिने कोही पाइनँ’ भन्दै भक्कानिनु पर्थेन ।
दुर्गाप्रसाद : चालीस वर्ष
उन्नाइस–बीस वर्षको उमेरमा विधवा आमा र साना भाइबहिनीसहितको जिन्दगानीको दुःख पखाल्न दार्जिलिङ हान्निएका थिए, इलामका दुर्गाप्रसाद तिम्सिना । घरको अभर टाल्न भएको तोरी बेचेर मुगलान हान्निएका दुर्गार्प्रसाद बेखबर चालीस वर्ष बिनाअभियोजन, बिनान्यायिक निरूपण भारतीय जेलमा सडाइए । एउटा मानिसको जीवनको चालीस वर्ष समय जेलको गतिहीन चारदिवारमा बिनाअभियोजन उसै लट्काएर राखिनु कति अत्याचार ! कति अन्याय एउटा मानिसमाथि !
चालीस वर्ष भनेको सामान्य कालखण्ड होइन । एउटा मानिसको जिन्दगीको चालीस वर्ष उसका लागि सब थोक हो । कमाउने; आजको परिपाटीमा जीवन व्यवस्थित गर्ने; जिन्दगीको एउटा खिरिलै सही, किरमिरे नै सही, गोरेटो कोर्ने आफ्नै पैतालाले डोब बनाएर । त्यो चालीस वर्ष लामो ऊर्जावान् समय बिनाअभियोजन जेलको कोठरीमा अनिश्चित कैदको भुक्तमान थोपरेर, एउटा नागरिकलाई निरीह बनाएर थुनिबस्ने नमुना लोकतन्त्रलाई आजको विश्वले आफ्नो हिसाबमा कसरी अभिलेखन गर्छ भन्ने प्रश्न उठी नै हाल्छ । नजाने विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रको न्यायिक बाटो कति साँघुरो छ र त्यहाँको लोकतान्त्रिक व्यवस्था कति मनोमानीपूर्ण छ भन्ने जान्न बाँकी विश्वले दुर्गाप्रसाद प्रकरणलाई केस स्टडी बनाउला–नबनाउला !
कहिले छुट्ने हुँ या आफू कुन अपराधमा कस्तो सजाय पाएर जेलको कोठरीमा थुनिएको हुँ भन्नेसम्म थाहा नपाई एकतमासको अन्योल र नीरस जिन्दगी बाँच्दा दिलका संवेदनात्मक तारहरू कतिपटक छियाछिया हुन्छन् र परिणाममा संवेदना लाटिँदै–लाटिँदै गएर कसरी भावहीन बनिसक्छ भन्ने कुराको तस्बिर दुर्गाप्रसादको पछिल्लो अवस्थाले पनि देखाउँछ । मानिसहरूको उपेक्षा, सत्ता व्यवस्थाले एउटा निरीह मानिसलाई बन्दुकको बलमा गरेको अनाहकको अत्याचार, दुःखको आकाशले थिचेर कहिल्यै टाउको उठाउन नसक्ने बनाएको बेहाल दैनिकी, अन्योलको बेहिसाब कोर्रा खाँदाखाँदा मानिस कसरी वाणीसम्म हराएर निःशब्द भइजान्छ, दुर्गाप्रसाद त्यसको एउटा उदाहरण हुन् ।
नजाने भूपालमान र दुर्गाप्रसादजसरी नै भारतका या अन्य देशका जेलहरूमा अत्याचार खेपी बसेका दुखिया नेपालीहरू कति छन्, राज्यसँग हिसाब छैन । खाडी देशका जेलहरूमा त्यहाँको कानुनी प्रक्रिया र अनेकन् झन्झट बुझ्न नसकेर बिलखबन्दमा परेका नेपालीहरूको चीत्कार र गुहारको सिलसिला जारी छ । देशभित्रै भारी बोक्ने भरियाहरू अर्बौं कर छली गरेको अभियोगमा जेल गइरहेका छन् । दर्ता भएको कम्पनी छ । त्यसको कारोबार चालु छ । एउटा भरिया जेल जाने तर कम्पनीको नाममा भएको कारोबार आज पनि निर्बाध चल्न दिने काम भइरहेको छ । कर छलेको अभियोगमा मजदुरलाई जेल पठाउने यो टाठाबाठाहरूको व्यवस्थाको कोर्राले हानिएर गरिखाने श्रमजीवीहरूले हैरानीको भुक्तमान बेहोर्नुपरेको छ । कहिले अर्कै मानिसको नाममा निरपराध व्यक्ति जेलमा कोचिएको हुन्छ । नाम मिलेको, काम मिलेको, जात मिलेको, गाउँ मिलेको, अनुहार मिलेको अपराधमा निरपराधहरू जेलमा सडाइन्छन् र अपराधीहरू यो सबै सेटिङ मिलाएर थप अपराधको जालो बिछ्याइरहेका हुन्छन् ।
यसरी बिनाअपराध, बिनाअभियोजन विदेशी जेलमा वर्षौं सडाएर जीवनको ऊर्जाशील समय, परिवार, जिन्दगी तहसनहस बनाइएका मानिसले भोगेको अत्यासको, चुकाएको मूल्यको कुनै मापन त हुन सक्दैन; त्यसको क्षति त जतिसुकै रकमले पनि पूर्ति गर्न सक्दैन; तर पनि वर्षौं जेलमा राखेर निर्दोष ठहर गरेर छाडिसकेपछि या अपराधै गरेको भए पनि सजाय भुक्तान गर्नुपर्नेभन्दा दोब्बर बढी समय जेलमा बिनाअभियोजन लट्काइसकेपछि उसलाई रित्तै हात लघार्ने काम लोकतन्त्रको कस्तो चरित्रमा पर्छ भनेर बाँकी दुनियाँलाई बताउनुपर्छ, भारतीय लोकतन्त्रले ।
भूपालमान दमाई र दुर्गाप्रसाद तिम्सिनाहरूमाथि भारतीय सत्ता व्यवस्थाले जुन अत्याचार र अन्याय गरेको छ, त्यसका लागि उसले उनीहरूसँग माफी माग्नुपर्छ । बाँकी जिन्दगी तैबिसेक सहज होस् भनेर यथेष्ट क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । आफूलाई देशभक्त, राष्ट्रवादी भन्दै दोबाटामा बसेर राष्ट्रवादको लैबरी फलाक्नेहरूको नागरिकमाथि बज्रिएको अन्यायको घडीमा देखिएको मौनता खेदजनक छ । नेपाल सरकारले, आफूलाई नम्बरी राष्ट्रवादी भनिबस्ने खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारले यो विषयमा भारत सरकारसँग तत्काल कुरा गर्नुपर्छ । पीडित नागरिकलाई अभरका बेलामा समेत काम नलाग्ने राज्य, देश कुन मनले शिरमा बोकिबस्छ, नागरिकले नत्र ? नागरिकमाथि भएको अन्यायमा मुख खोल्न नसक्ने हो भने खड्गप्रसादले फलाक्ने गरेको राष्ट्रवाद जाली, झेली र नक्कली भएको थप पुष्टि हुँदैन र ?
प्रकाशित : चैत्र १६, २०७७ ०८:३६
मुख्यमन्त्री राउतलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका जनमत कार्यकर्तालाई प्रहरीले रोक्यो